Miakatra ny olona mandritra ny areti-mandringana miaraka amin'ny fanavaozana mahatalanjona
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Miakatra ny olona mandritra ny areti-mandringana miaraka amin'ny fanavaozana mahatalanjona
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Bill Gates dia misy hafatra ho an'izao tontolo izao.
Ny angon-drakitra vaovao dia manambara fa miakatra izao tontolo izao mba hisorohana ny tranga tranga ratsy indrindra tsy hitranga; mila famatsiam-bola mandritra ny fotoana maharitra ny jiro mba hiantohana ny fanarenana ara-drariny sy ny fanohizana ny fandrosoana mankany amin'ny Global Goals, fantatra amin'ny hoe UN Sustainable Development Goals.
Nanangana ny Tatitra Goalkeepers fahadimy isan-taona an'i Bill & Melinda Gates Foundation androany, izay manasongadina taham-pahalalana manerantany mampiseho ny fiatraikan'ny valanaretina amin'ny fandrosoana mankany amin'ny Tanjon'ny Firenena Mikambana Momba ny Fampandrosoana maharitra (Tanjon'ny Global).
Ny tatitra tamin'ity taona ity, mpiara-miasa tamin'i Bill Gates sy Melinda French Gates, mpiara-mitantana ny Bill & Melinda Gates Foundation, dia mampiseho fa ny tsy fitoviana ateraky ny COVID-19 dia mijanona ho matanjaka, ary ireo izay voa mafy indrindra tamin'ny areti-mandringana dia ny miadana indrindra amin'ny fahasitranana.
Noho ny COVID-19 dia olona 31 tapitrisa fanampiny no natosiky ny fahantrana fatratra tamin'ny taona 2020 raha oharina tamin'ny 2019. Ary raha 90% ny toekarena mandroso dia hahazo indray ny tahan'ny fidiram-bola isaky ny pandemiana amin'ny taona ho avy, ampahatelon'ny ambany sy antonony ihany -karena ara-toekarena antenaina hanao an'izany.
Soa ihany, tao anatin'ity faharavana ity, dia niroso ny tany mba hisorohana ny tranga ratsy indrindra. Tamin'ny Tatitra Goalkeepers tamin'ny taon-dasa, ny Institute for Metrics momba ny fahasalamana sy ny tombana (IHME) dia naminavina ny fihenan'ny isa 14 isan-jato amin'ny fandrakofana vaksinim-pirenena - hamafana ny fandrosoana mandritra ny 25 taona ao anatin'ny 25 herinandro. Ny fandinihana vaovao avy amin'ny IHME dia mampiseho fa ny fihenan'ny, na dia mbola tsy azo ekena aza, dia ny antsasaky ny nantenaina ihany.
Ao amin'ny tatitra, ireo seho mpiara-miasa dia manasongadina ny “fanavaozana manaitra” izay tsy nisy afa-tsy noho ny fiaraha-miasa sy ny fanoloran-tena ary ny fampiasam-bola eran-tany nandritra ny am-polony taona maro. Manaiky izy ireo fa mendri-piderana ny manalavitra ny tranga ratsy indrindra, saingy manamarika izy ireo fa tsy ampy izany. Mba hiantohana ny famerenana amin'ny laoniny marina ny areti-mifindra, dia miantso famatsiam-bola maharitra amin'ny sehatry ny fahasalamana sy toekarena izy ireo - toa ireo nahatonga ny fivoaran'ny vaksinin'ny COVID-19 haingana - hamporisihana ny ezaka fanarenana ary hamerenana izao tontolo izao amin'ny làlan-kaleha mihaona amin'ny Global Goals.
"[Ny taona lasa] dia nanamafy ny finoanay fa mety hisy ny fandrosoana fa tsy azo ihodivirana," hoy ny nosoratan'ireo mpiara-miasa. Raha afaka manitatra ny tsara indrindra tamin'ny zavatra hitantsika isika 18 volana lasa izay, azontsika atao ihany ny mamela ny areti-mandringana any aoriana ary manafaingana ny fandrosoana amin'ny famahana ireo olana lehibe toy ny fahasalamana, ny hanoanana ary ny fiovan'ny toetrandro. ”
Ny tatitra dia manasongadina ny fiatraikany ara-toekarena tsy mitovy amin'ny vehivavy manerantany. Any amin'ny firenena manana fidiram-bola ambony sy ambany dia ambany ihany ny vehivavy no voa mafy noho ny an'ny lehilahy noho ny fitotonganan'ny tany izay nateraky ny areti-mandringana.
"Miatrika sakana ara-drafitra isaky ny vazan-tany ny vehivavy, mamela azy ireo ho mora tohina kokoa noho ny fiakaran'ny areti-mandringana," hoy i Melinda French Gates. "Amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny vehivavy ankehitriny sy ny fiatrehana ireo tsy fitoviana ireo, ny governemanta dia afaka mandrisika fanarenana ara-drariny kokoa amin'ny fanamafisana ny toekarena manoloana ny krizy amin'ny ho avy. Tsy ny zavatra mety ihany no hatao fa ny politika hendry izay hahasoa ny tsirairay. ”
Ny tatitra dia mampiseho ihany koa ny fomba antsoina hoe "fahagagana" amin'ny vaksinin'ny COVID-19 dia vokatry ny fampiasam-bola, politika ary fiaraha-miasa efa am-polony izay nametraka ireo fotodrafitrasa, talenta ary tontolo iainana ilaina hametrahana azy ireo haingana. Na izany aza, ny rafitra namela ny fampandrosoana tsy misy hatrizay sy ny fametrahana ny vaksinin'ny COVID-19 dia misy indrindra any amin'ireo firenena manankarena, ary vokatr'izany dia tsy nahazo tombony mitovy izao tontolo izao.
"Ny tsy fisian'ny fidirana ara-drariny amin'ny vaksinin'ny COVID-19 dia lozam-pifamoivoizana amin'ny fahasalamam-bahoaka," hoy i Bill Gates. “Miatrika ny tena loza mety hitranga isika amin'ny ho avy, ny firenena manankarena sy ny vondrom-piarahamonina dia hanomboka hitsabo ny COVID-19 ho aretina iray hafa amin'ny fahantrana. Tsy azontsika atao ny mamela ny areti-mandringana any aoriantsika mandra-pahatongan'ny olona rehetra, na aiza na aiza toerana onenany, hanana vaksiny. ”
Maherin'ny 80% ny vaksinin'ny COVID-19 rehetra no notanterahina any amin'ny firenena manana fidiram-bola ambony sy antonony hatreto, ary ny sasany miantoka in-droa hatramin'ny telo heny ny isa ilaina mba hahafahan'izy ireo manarona ireo mpanentana; latsaky ny 1% ny fatra notaterina tany amin'ireo firenena ambany fidiram-bola. Ankoatr'izay, ny fahazoana vaksinin'ny COVID-19 dia nifamatotra mafy tamin'ireo toerana misy ny R&D vaksiny sy ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra. Na dia fonenan'ny 17% amin'ny mponina eran-tany aza i Afrika, ohatra, dia latsaky ny 1% ny fahaizan'ny mpamokatra vaksin'izao tontolo izao.
Farany, ny tatitra dia miantso an'izao tontolo izao hampiasa vola amin'ny R&D, fotodrafitrasa ary fanavaozana amin'ny toerana akaiky ny olona izay mahazo tombony.
"Tsy maintsy mampiasa vola amin'ireo mpiara-miombon'antoka eo an-toerana izahay mba hanamafisana ny fahafahan'ny mpikaroka sy ny mpanamboatra any amin'ny firenena ambany fidiram-bola hamoronana vaksinina sy fanafody ilain'izy ireo," hoy ny CEO Gates Foundation, Mark Suzman. “Ny fomba tokana hamahana ny olantsika lehibe indrindra amin'ny fahasalamana dia ny fisarihana ny fanavaozana sy ny talentan'ny olona eran'izao tontolo izao.
Amin'ny lafiny maro, ny areti-mandringana dia nanandrana ny fanantenantsika. Saingy tsy nanimba azy io.
Tao anatin'ny toe-javatra sarotra indrindra tsy takatry ny saina, nahita maso zava-baovao mahavariana izahay.
Hitanay ny fomba haingana hanovantsika ny fitondran-tenantsika, amin'ny maha-olona antsika sy amin'ny fiaraha-monina, rehefa mitaky izany ny toe-javatra.
Ary androany, dia afaka mitatitra ihany koa isika fa ny olona amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia efa niarina hiaro ny fivoaran'ny fampandrosoana efa am-polony taona maro lasa izay — raha ny momba ny SDG, farafaharatsiny, ny fiantraikan'ny areti-mandringana COVID-19 mety ho ratsy lavitra noho izany.
Herintaona izay nanamafy ny finoantsika fa azo atao ny mandroso fa tsy azo ihodivirana. Be ny ezaka ataontsika eo amin'ny raharaha. Ary, amin'ny maha optimista tsy manam-paharetana antsika, mino izahay fa afaka manomboka mianatra avy amin'ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazan'ny areti-mifindra hatreto. Raha afaka manitatra ny tsara indrindra tamin'ny zavatra hitantsika isika 18 volana lasa izay, azontsika atao ihany ny mamela ny areti-mandringana any aoriantsika ary manafaingana ny fandrosoana amin'ny famahana ireo olana lehibe toy ny fahasalamana, ny hanoanana ary ny fiovan'ny toetr'andro.
Inona avy ireo vahaolana manampy amin'ny hazakazaka hamaranana ny areti-mandringana? Jereo Bill Gates sy mpiandry harato telo manasongadina fitaovana ampiasaina amin'ny ady amin'ny COVID.
Vakio ny tatitra:
Mitantara tantara mahagaga ny data
Nandritra izay taona lasa izay, tsy azo atao ny tsy miraharaha ireo tsy fitoviana lehibe, tsy amin'ny hoe iza no narary sy iza no maty - fa koa ireo izay tokony handeha hiasa, iza no afaka miasa any an-trano, ary very asa tanteraka. Ny tsy fitoviana ara-pahasalamana dia efa antitra toy ny rafitry ny fahasalamana ihany, saingy nitaky areti-mandringana eran-tany izany mba hampahatsiahivana an'izao tontolo izao ny vokany.
An-tapitrisany maro ao anatin'ny fahantrana mihoampampana
Ho an'ny maro, ny fiatraikany ara-toekarena ateraky ny areti-mandringana dia mbola matotra sy maharitra. Fantatray fa mety ho toa iraka tsy azo inoana amin'ity lohahevitra ity izahay - izahay dia olona roa be vintana indrindra eto an-tany. Ary vao mainka nazava kokoa io areti-mandringana io. Ny olona toa antsika dia efa niatrika ny areti-mandringana tamin'ny endrika tsara, ary ireo izay tena marefo kosa dia voa mafy indrindra ary mety ho ny miadana indrindra sitrana. Olona 31 tapitrisa fanampiny manerantany no voatosika ho amin'ny fahantrana lalina vokatry ny COVID-19. Na dia 70% aza ny lehilahy mazàna kokoa matin'ny COVID-19, ny vehivavy dia manohy voakitikitika noho ny fiatraikany ara-toekarena sy ara-tsosialin'ny valanaretina: amin'ity taona ity, ny asan'ny vehivavy maneran-tany dia antenaina hijanona asa 13 tapitrisa ambanin'ny taona 2019 - raha ny lehilahy kosa ny asa dia antenaina ho sitrana amin'ny taha talohan'ny pandemia.
Na dia mandrahona hanimba ny fandrosoana nataontsika aza ny variants sasany, dia manomboka miarina ny toekarena sasantsasany, mitondra miaraka aminy ny fisokafan'ny orinasa sy ny famoronana asa. Saingy ny fanarenana dia tsy mitovy eo anelanelan'ny — ary na ny ao anatiny aza. Amin'ny taona ho avy, ohatra, ny 90% amin'ny toekarena mandroso dia antenaina hahatratra ny tahan'ny fidiram-bola mialoha ny areti-mandoza isaky ny capita, raha ny ampahatelon'ny ekonomia manana fidiram-bola ambany sy antonony kosa no antenaina hanao toy izany ihany koa. Mihitsoka ny ezaky ny fampihenana ny fahantrana - ary midika izany fa olona 700 tapitrisa, ny ankamaroany amin'ny firenena ambany sy ambany ny vola, vinavinaina ho tototry ny fahantrana lalina amin'ny 2030.
Mitombo ny banga amin'ny fanabeazana
Hitanay izany tantara izany raha ny fanabeazana no resahina. Talohan'ny areti-mandringana dia zaza sivy amin'ny 10 any amin'ny firenena ambany ny vola tsy afaka mamaky sy mahatakatra lahatsoratra fototra, raha ampitahaina amin'ny iray amin'ny ankizy 10 any amin'ny firenena be vola.
Ny porofo voalohany dia manondro fa ny fahaverezan'ny fianarana no lehibe indrindra amin'ireo vondrona voahilikilika. Ny tsy fitoviana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia hita ihany koa any amin'ny firenena manankarena. Any Etazonia, ohatra, ny fahaverezan'ny fianarana teo amin'ireo mpianatra amin'ny taona fahatelo mainty sy latino dia, tamin'ny antsalany, dia avo roa heny noho ny an'ny mpianatra amerikana fotsy sy aziatika. Ary ny fahaverezan'ny fianarana eo amin'ny kilasy fahatelo amin'ny sekoly mahantra dia ny telo tamin'ireo mitovy taona aminy amin'ny sekoly ambany fahantrana.
Ankizy Betsaka Vaksiny Tsy Misy Vaksiny
Nandritra izany fotoana izany dia nidina hatramin'ny ambaratonga hita farany tamin'ny taona 2005 ny tahan'ny fanaovana vaksinim-pianakaviana mahazatra indrindra. Teo anelanelan'ny fanombohan'ny areti-mandringana sy ny fotoana nanombohan'ny serivisy ara-pahasalamana tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona 2020, zaza maherin'ny 30 tapitrisa eran'izao tontolo izao no tsy nahazo ny vaksiny — izany hoe 10 tapitrisa bebe kokoa noho ny areti-mandringana. Mety ho maro amin'ireo ankizy ireo no tsy hanaraka fatra.
Saingy eto izahay dia nahagaga anay ny angona: Herintaona lasa izay, nitatitra izahay fa ny Institute for Metrics momba ny fahasalamana sy ny tombana dia nanombatombana fa ny fandrakofana vaksinina dia hidina 14 isan-jato isan-jato amin'ny taona 2020, izay mety nahatratra 25 taona nandroso nidina. Saingy mifototra amin'ny tahirin-kevitra vao haingana, dia toa ny antsasaky ny fandrotsahana ny fandrakofana vaksiny — na dia nandrava aza - dia ny antsasany ihany. ShareLegend: Tatitra 2020 Tatitra
Miakatra ny olona
Rehefa nanohy nanasivana ny angon-drakitra izahay, dia hita fa tsy olana io: amin'ny famantarana marobe momba ny fampandrosoana, dia nirongatra izao tontolo izao tamin'ny taona lasa mba hisorohana ny tranga ratsy indrindra.
Raiso, ohatra, ny tazomoka, izay efa iray amin'ireo aretina tsy mety mihatra indrindra eran'izao tontolo izao: 90% ny trangana tazomoka hita any Afrika. Tamin'ny taon-dasa, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia naminavina fikorontanana goavambe ho an'ny fisorohana ny tazomoka ilaina izay mety hamerina ny fandrosoana 10 taona - ary hiafara amin'ny fahafatesan'ny 200,000 fanampiny noho ny aretina azo sorohina. Izany projet izany dia nanosika ny firenena maro hanao zavatra hahazoana antoka fa nozaraina ny lambam-pandriana ary nijanona teo ny fanafody antimalarial. Benin, izay ny tazomoka no antony voalohany mahatonga ny fahafatesana, dia nahita fomba fanavaozana aza teo afovoan'ny areti-mifindra: Namorona rafitra fizarana vaovao sy nomerika ho an'ireo lambam-pandriana voadinika famonoana bibikely izy ireo, nahazo 7.6 tapitrisa harato tao amin'ireo trano nanerana ny firenena tamin'ny ara-drariny ihany. 20 andro.
Cotonou, BeninPhoto nahazoana lalana avy tamin'i Yanick Folly / AFP tamin'ny alàlan'ny Getty Images
Mendrika ny fankasitrahana an'izao tontolo izao izy ireo.
Mazava ho azy, ny habetsaky ny fiatraikan'ny areti-mandringana amin'ny SDG dia handany taona maro vao hahatakatra tsara, satria maro kokoa ny angona azo alaina. Ary tsy mampihena ny tena fijaliana ateraky ny areti-mandringana ho an'ny olona na aiza na aiza io data io - lavitra azy io. Saingy ny fahaizantsika manondro famantarana tsara eo afovoan'ny areti-mandringana iraisan'ny taranaka iray dia lehibe tokoa. Nofatorana tanana iray tao aorin-damosin'izy ireo, olona, ​​fikambanana ary firenena tsy tambo isaina no nirohotra tetsy sy teroa mba hanavao, hampifanaraka ary hanangana rafitra mahazaka, ary noho izany dia mendrika ny fankasitrahana an'izao tontolo izao izy ireo.